Sida loo kaabta iPhone Music Si fudud s
> Resource > iPhone > Sida loo kaabta iPhone Music
Si looga fogaado shilka kasta oo ay lumiyaan music, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad music iPhone gurmad si PC ama Lugood. Si kastaba ha ahaatee, ma sahlana in uu sameeyo hawsha. Haddii aad isku dayday in ay u isticmaasho Lugood inay sameeyaan hawsha, waa in aad ku guul darreysato. Apple iTunes oo keliya kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso kuwa Lugood Store iibsaday heesahaaga Lugood, ma aha kuwa soo bixi toos ah internet-ka ama goolka laga helay ilo kale oo ku saabsan iPhone. Sidaas darteed, haddii aad rabto in aad heeso gurmad oo aan la soo iibiyey iPhone in aad PC ama Lugood, waxaad u baahan tahay qalab xirfadeed si ay kuu caawiyaan. Halkan, waxaan jeclaan lahaa in aad ku talin dhamaystiran oo gurmad iPhone qalab. Waa Wonderhsare TunesGo ama Wonershare TunesGo (Mac) . Iyada oo ay caawimaad, waxaad heesaha oo dhan si deg deg ah gurmad kartaa iPhone si aad u computer ama Lugood. Intaa waxaa dheer, waxa aan kaliya oo aad kuu ogolaanaysaa gurmad songs, laakiin sidoo kale aad u saamaxaaya in ay dhoofin videos iyo sawiro in computer sidoo kale.
Sida loo music iPhone gurmad
Marka hore, download this gurmad music iPhone on your computer qalab. Markaas raac tallaabooyinka hoose si aad u barato tallaabooyinka. Aan bilaabo version Windows ah. Haddii aad isticmaasho version Mac, aadan awoodin in aad playlists gurmad ka iPhone in computer / Lugood.
Step1: Isku aad iPhone la PC
Ka dib markii ay soo degsado, rakibi iyo bilowno songs iPhone gurmad on your computer qalab. Markaas xiriiriyaan iPhone la computer via cable USB soo socda aad iPhone. Qalabkani waxa uu isla markiiba waxaa lagu ogaan doonaa ka dibna waxa ay u muujiyaan in uu furmo suuqa hoose.
Fiiro Gaar ah: Waxa muhiim ah in aad kala soo bixi iyo rakibi Lugood on your computer ka dib markii rakibidda TunesGo.
Step2: songs kaabta iPhone
Si songs gurmad si PC, waxaad riixi kartaa "Dhoofinta Music si gal" furmo suuqa hoose. Si music iPhone gurmad si Lugood, guji "iDevices Copy in Lugood" iyo "Start". Daaqadda Minipiller-up, ka saar marks hor videos, Lugood U, Podcast iyo in ka badan. Markaas riix "nuqul Lugood".
Ama, heeso iyo playlists gurmad on iPhone, waxaad riixi kartaa "Media" khaanadda bidix ee kooxda. Tani waxay keeni doonaa suuqa kala maamulka warbaahinta ayaa dhanka midig. Guji "Music". Markaas uu furmo suuqa maamulka music, heeso xulo aad rabto in aad gurmad, ka dibna riix "Dhoofinta in". In liiska hoos-hoos u, in aad sidoo kale dooran kartaa "Dhoofinta si aad u computer" ama "Dhoofinta in Lugood Library".
Haddii aad go'aansato in gurmad heesahaaga computer, doortaan jidkaa badbaadiyo in uu kaydiyo music ka dib xulashada "Dhoofinta si aad u computer". Haddii aad xoojiyaa oo heeso badan si Lugood hor, waxaad riixi kartaa batoonka "Smart dhoofinta in Lugood". Marka aan sidaa yeelno, waxa aad awoodi kartaa in aad ka fogaato wareejinta songs nuqul.
Heeso ka sokow, haddii aad go'aansato in aad playlists gurmad on iPhone, guji "playlist". Dooro playlists aad doonayso oo guji "Dhoofinta in". Sidoo kale, dooro meel on your computer si loo badbaadiyo playlists dhoofiyo. Haddii aad rabto in gurmad ay u Lugood music, waxaad riixi kartaa saddexagalka rogay hoos "Dhoofinta in" iyo dooran "Dhoofinta in Lugood Library".
Waa mid aad u fudud in ay dib u songs iPhone in Lugood iyo PC, sax? Wondershare TunesGo waa Lugood Saaxiibkiis ugu fiican. Waxay ka dhigaysa ilaa meesha Lugood gaaban dhaco. Sidaa daraadeed, doonaa mar dambe ma aad walwalo songs khasaara, videos ama sawiro ka iPhone.
Isku day TunesGo Wondershare in hadda dib ilaa iPhone!
Sida loo Delete Music ka iPhone
Sida loo Delete Kukiyada on iPhone